Is-qurxinta: Faa'iidooyinka, Qasaarooyinka, iyo Talooyinka Sare | Ragga Stylish
Is-tabin waa istiraatiijiyad lagu xisaabtamo bilowga cimilada wanaagsan. Waxay ka caawisaa helitaanka lugaha gaagaaban ee diyaarka ah ka dib markii ay ilaalinayaan bilo badan qorraxda.
Si kastaba ha ahaatee, alaabooyinkani kuma koobna waqti gaar ah oo sanadka ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa inta lagu jiro xilliga qaboobaha, si loo dayactiro tananka la gaadhay xilliyada ciidaha xagaaga, iyo sidoo kale munaasabadaha gaarka ah ee aad rabto inaad muuqaal dheeraad ah u ekaato. Taasi waa kiiska dadka caanka ah, ee u adeegsada xafladaha, toogashada ama sawirrada sawirada.
1 Faa'iidooyinka iyo qasaaraha isdaba-marinta
2 Tilmaamaha isdabamarinta jirka
2.1 Dooro qaabka kuugu habboon adiga
2.2 Raac tilmaamaha isticmaalka
2.4 Xaydha oo fuuq celisa
2.6 Samee habeenkii
Faa'iidooyinka iyo qasaaraha isdaba-marinta
Waa in la ogaadaa in Is-tabelayaashu waxay leeyihiin faa'iidooyin, laakiin kama maarmaan xoogaa diidmo iyo taxaddarro. Iyaga oo garanaya, ayay mid walba ku xidhan tahay inuu go'aansado inuu adeegsanayo ama uu raadinayo mid kale oo uu ku muujiyo jirkiisa.
Faa'iidada ugu weyn ee is-jiridda ayaa ah a hab dhakhso leh oo ku habboon si aad u eegto midab badan. Waxay kuu oggolaanayaan in lagaa wasakheeyo sanadka oo dhan daqiiqado gudahood. Oo adigoon ku dhaqaaqin xeebta ama sariirta maqaarka, waxaa laga heli karaa guriga.
Sidoo kale, liddi ku ah waxa ku dhaca hababka dhaqameed (qorraxda iyo sariiraha maqaarka), badeecooyinka is-dhaldhalaalka ayaa caawiya hel tan tan bilaash ah oo UV ah. Waa in la ogaadaa in soo-gaadhista dheer ee shucaaca UV ay khatar ku tahay caafimaadka isla markaana ay la xiriirto halista sii kordheysa ee kansarka.
Maqaar-gacmeedka Artifishalka ah maahan mid joogto ah. Way baaba'aysaa markay maalmuhu socdaan. 7-10 maalmood kadib waa lagama maarmaan in dib loo codsado badeecada inta badan kiisaska. Tani waxay ku lug leedahay maal gelin waqti, dadaal iyo lacag ah oo ay tahay in lagu xisaabtamo markii go'aan la gaarayo.
Dhinaca kale, sida iska cad natiijada ay bixiyaan waa wax dabiici ah. Laakiin, in kasta oo uu yahay tan been abuur ah, haddii si sax ah loo sameeyo, si fiican buu u shaqeyn karaa inta badan. Hadafku waa in badeecadu ahaato mid aan la ogaan karin.
Tilmaamaha isdabamarinta jirka
Kuwa soo socdaa waa talaabooyin la raacayo oo loo arko inay wax ku ool yihiin markay tahay hel tanane sida ugu macquulsan adoo adeegsanaya is-shaashadaha oo iska ilaali musiibada guud:
Dooro qaabka kuugu habboon adiga
Tayada badeecadu waa mid go'aansan. Noocyada sida Lancome, Clarins, St. Moriz ama St. Tropez ayaa ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan. Laakiin sidoo kale qaabku. Suuqa maanta waxaa laga helaa dhowr nooc oo is-fidiye ah:
Marka laga hadlayo ragga, khubaradu badanaa waxay kula taliyaan is qarxiyayaal mousse ah ama buufin. Mousse wuxuu si fudud ugu faafaa timaha, kaas oo bixiya daboolis isku mid ah.
Raac tilmaamaha isticmaalka
Marka ay timaado is-tabtayaasha, waxaa lagama maarmaan ah in aad looga digtoonaado sida loo isticmaalo. Soo-saareyaasha waxaa ka mid ah tilmaamo taxane ah oo ku yaal dhabarka baakadka kuwaas oo fure u ah helitaanka natiijada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Ha dalban wax ka badan hal jaakad isla maalintaas. Sug 24 saacadood, iyo haddii hoosku weli u muuqdo mid aad u fudud, mar kale mari jaakad. Ku dhaqaaqida tartiib tartiib ayaa kaa caawin doonta inaad ku guuleysato codka ugu fiican ee adiga kugu habboon. Xusuusnow in had iyo jeer ay jirto baaxad si loo helo hal cod oo dheeri ah, halka aad dhanka ka soo horjeedka ay ka dhib badan tahay in la gaaro..
Xaydha oo fuuq celisa
Sifeynta iyo uumeynta maqaarka dhowr saacadood ka hor inta aan la is-marin maqaarka waxaa loo arkaa inay gacan ka geysaneyso gaaritaanka natiijo intaa ka sii badan. Sababta ayaa ah maqaarka dhintay iyo meelaha aadka u qalalan waxay u muuqdaan inay midab kale beddelayaan.
Haddii inkasta oo la sii daayo, xad-dhaafka wakiilka is-maqaarka wuxuu ku dhammaadaa inuu ku urursado jilbaha ama xusullada, waxaa jira xeelado lagu xalliyo. Mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan ayaa ah ku nadiifi isku dar ah liin iyo soda.
Sidoo kale, waqtiga is-samaynta, yeelashada maqaar qoyan iyo timo waxay sababi karaan xariijimo. Marka waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin qoyaanka wax yar kahor kahor ama aadan qoyan gadhka, safka timaha ama timaha jirka.
Waxaa jira faahfaahin yar oo inta badan la iska indhatiro, laakiin taasi waxay si dhakhso leh u siin kartaa tan been abuur ah. Dareenka ka soo baxa is-maqaar-yaqaanka maqaarkiisa oo keliya kuma dhex dillaaco. Waxay ku xiran tahay qofkasta oo codsada inuu hubiyo inay kaliya taabato maqaarka oo aan lagu xirin dhar, timo, ciddiyo iyo qaybo kale oo aysan ahayn inay ahaato. Qeybtan ugu dambeysa, sida caadiga ah waxaa lagugula talinayaa inaad ku daboosho wax soo saar cufan (tusaale ahaan, bushimo bushimo) ka hor intaadan dalban is-maareynta si looga hortago inay dhuuqaan badeecada.
Habeenku waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dabaqo badeecooyinka is-warshadeeya. Subaxda xigta, qubeyska qallafsanaanta waxay ka caawineysaa baabi'inta xad-dhaafka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa fikrad fiican inaad ku xoqdo tuwaal qallalan oo gadhka ah, qadka koritaanka timaha iyo guud ahaan dhamaan meelaha timaha leh ee jirka wax uun ka dib marka la codsado si looga hortago in xuubku ku dheganaado ama midabka loo beddelo. timaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Is-jaridda, sida dhakhso loogu helo